Sida loo Guba AVI in DVD on Windows 10
> Resource > Windows > Sida loo Guba AVI in DVD ee Windows 10
Ma kaliya la casriyeeyay si Windows 10 oo aadan aqoon sida loo gubi AVI in DVD nidaamka cusub ee qalliinka? Ha welwelin. In this article, waxaan inta badan la wadaagaan qalab lagu kalsoonaan karo oo kaa caawinaya in aad ku gubi AVI in DVD ee Windows 10 effortlessly.
Taasi Wondershare DVD gubi . Waxaa gebi ahaanba la jaan qaada Windows 10 oo ka shaqeeya aad si hufan on nidaamka cusub. Sidaa daraadeed, waxaad gubi karo DVD losslessly ka faylasha aad AVI, xitaa kale file kasta oo qaab caanka ah sida wmv, FLV, Mpg, MPEG, MKV, MP4, M4V, MOV, H.264, MTS / M2TS / TS / AVCHD iwm nidaamka waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar.
Ka hor inta AVI gubanaya si DVD, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo AVI si DVD Converter for Windows 10 marka hore. Iyo app weyn yahay si toos ah laga heli karaa halkan. Just aad u hesho adigoo gujinaya link download hoos ku qoran, ka dibna raac tallaabo tallaabooyinka talaabo.
1 AVI Load videos in AVI ay u DVD gubi for Windows 10
Orod AVI in DVD gubi for Windows 10, ka dibna riix "Import" in ay ku shuban aad isha files AVI. Waxa kale oo aad ku dari kartaa files music sida music asalka ama sawiro .JPEG, PNG, .BMP haddii loo baahdo.
In la abuuro cutubka kale, kaliya riix "dar horyaalka" button ka dibna magaca ka beddelo sida baahidaada. Sida caadiga ah, waxaa jiro xad ku saabsan nambarada horyaalka, laakiin waa in aad ka fikiraan tusiyaha size file hoose (bar cagaaran).
2 In kor loo qaado AVI videos in Windows 10 (Ikhtiyaar)
AVI in DVD gubi for Windows 10 kale oo ay bixisaa in-barnaamijka muuqaalada tafatirka inuu kaa caawiyo inaad kor loogu qaado videos istareexsan. Riix icon qalin ag video clip kasta, waxaad soo daaqaddii edit ah. Halkan, waxaad isku shaandheyn karaa 90 darajo, jar ka soo qayb aan la rabin, ku dar watermark, qabsato dhalaalka, bedelkeeda, volumn, iyo in ka badan.
3 Guba AVI in DVD ee Windows 10
Hadda waxaad ku dhameysatay wada dhammaaday shuqulkii diyaarinta, kaliya geliso DVD disc maran aad DVD qoraa galay, iyo dooran tayada wax soo saarka. Haddii aad u arkaa in ay ka badan line cas, waxaad dooran kartaa "taam u disc" ama bedeli DVD aad la disc sare awoodda sida DVD-R 9.0G.
Hadda riix "Guba" badhanka ka furmkidoona AVI in DVD gubashada diinta ee Windows 10. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa suuqa kala horumarka ah. Marka AVI in DVD qoraal dhameystiran, disc DVD ee tuurid si toos ah. Waxaad si toos ah u geli laga yaabo in ciyaaryahan DVD caadi ah in ay ku raaxaystaan ​​on TV ciyaaryahanka DVD guriga khali kor. Ka sokow gubanaya files AVI in DVD disc in Windows 10, waxa kale oo aad barnaamijkan si ay u abuuraan karin folder DVD ama file image ISO u qaybsiga fiican ama ka dib gubanaya istareexsan.
Madaxda on : AVI in DVD Converter Windows 10 bixisaa bedeley badan DVD oo lacag la'aan ah. Riix tab Menu, ka dibna soo qaado mid ku habboon DVD aad. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa DVD arrimo dheeraad ah adigoo gujinaya fallaadha cagaaran download kaliya ayan ku Template ah.
Free download AVI in ay gubi DVD for Windows 10: